ကျော်စိုးမိုး (နည်းပညာ): myandroiddict ( အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် ) အဘိဓါန်
myandroiddict ( အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် ) အဘိဓါန် လေးဖြစ်ပါတယ် ။
ကျွန်နော့် ဖုန်း android 2.3.3 နဲ့ တော့ တော်တော် ကို အဆင်ပြေပါတယ် ။ loading ဖတ်တာ နဲနဲ လေးကြာတာတော့ ရှိပါလိမ့်မယ် ။ အလွန်ဆုံး မိနစ်ဝက်လောက်ကြာတက်ပါတယ် ။ မိုဘိုင်း အဘိဓါန်လေး ရှိနေတဲ့ အတွက် smart အဘိဓါန်တွေ တောင် သိပ်မလိုတော့သလို ဖြစ်သွားပါတယ် ။ install လုပ်တာ က တော့ သိပ်ထွေထွေ ထူးထူး မရှိလို့ မရှင်းပြတော့ပါဘူး
အောက်က ဒေါင်းလော့လင့်မှာ ရယူနိုင်ပါတယ် ......
ZeyatunNovember 1, 2013 at 3:10 AMရခိုင်လားကို အားပေးပါတယ်ကောင်းကောင်း ရေးနိုင်တာပဲနော်ReplyDeleteAdd commentLoad more...
Android Phone တွေကို Roots ဘာကြောင့် လုပ်ရတယ်
Sumsang andriod ဖုန်း မြန်မာမောင့်နှင့် ကီးဘုတ်သွင...
HACK ၀ိုင်ဖိုင် Android အတွက် apk
samaung galaxy y ဖုန်းအင်တာနက်ကနေ wi-fi shared လွှင...
ကွန်ပျုတာကို ပေါ့ပါးသွက်လက်အောင် ရှင်းပေးတဲ့ Pc Cl...
ကိုယ်တိုင် တင်ချင်သူ အတွက် Window7တင်နည်း မြန်မာ...
Window 8 အသုံးပြုနေသူများအတွက် အသုံးပြုနည်း မြန်မာ...
Window 8 မှာ Start Menu မပါရင် ဒါလေးသုံးလိုက်ပါ......
english Myanmar နှစ်မျိုးစလုံးတစ်ပြိုင်တည်းရိုက်နိ...
basic computer mozila firefox နဲ့ဒေါင်းကြမယ်
လေးလံနေတဲ့ Android ဖုန်းတွေကို အထိရောက်ဆုံးနှင့်အေ...
Assaulter v1.08.01 for Andorid Game
Gmail နှင့် အခြား google app များမပါသော Android ဖု...
3D ပြုလုပ်ဖန်တီးသော Blender: 3D content creation s...
ဓါတ်ပုံကို ခဲပန်းချီပုံ ပြောင်းသွားအောင်
ကွန်ပြူတာ မှ ဖုန်း(ဖုန်း မှ ကွန်ပြူတာ)Free phone c...
f/b ချက်ဘောက်မှာ အသုံးဝင်မယ်နော်
browser တစ်ခုထဲမှ f/b အကောင့်နှစ်ခု ဖွင့်ချင်သူတွေ...